Snorkeling Trip To Ngwe Saung - Bird island | Myanmar Travel Guide
Snorkeling Trip To Ngwe Saung - Bird island
by Kyaw Phyo Wai on May 26, 2016
2016 နှစ်သစ် ဇန်နဝါရီလမှာ ကျွန်တော်တို့ ငွေဆောင်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ငွေဆောင်က ရေသန့်တဲ့ကမ်းခြေဖြစ်တဲ့့ အတွက် ငွေဆောင်ကိုရွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ငပလီလောက်လည်း စျေးနူန်းစရိတ်စက သိပ်မများလို့ပါ။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Snorkeling(အသက်ရူပိုက်ကိုသုံးပြီး ရေအောက်ကမ္ဘာကိုကြည့်ရူ့ခြင်း) ပါ။ တချို့သိတဲ့ သူများလည်း သိပီးဖြစ်ကြမှာပါ။ ကျွန်တော့်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမှစပြီး လူသိများလာတဲ့ အတွက်ကြောင့်၊ Snorkeling လုပ်တာကို သိချင်တာရယ်ကြောင့်၊ လူအများပြောနေကြတာကို အားကျတာရယ်ကြောင့် သွားဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ မြိတ်ကျွန်းစုမှာပဲ လုပ်လို့ရတယ်လို့ သိထားလိုပါ။
• ဘယ်လိုသွားရမလည်း & ဘယ်မှာတည်းမှာလည်း •
ရန်ကုန် အောင်ဆန်းကွင်းကနေ Asia Dragon Express နဲ့ ည9နာရီ စထွက်ပြီး သွားပါတယ်။ မနက် 2နာရီလောက်မှာ ငွေဆောင်ကို ရောက်ပါတယ်။
ခရီးတစ်ခုကိုရောက်ရင် ပထမဆုံးစီစဉ်ရတာကတော့နေစရာပါ။ကျွန်တော်တို့တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်ကတော့ Yamonnar Oo Resort Hotel ပါ။
» Garden view ကို 65,000 ကျပ်
» Sea view ကို 115,000 ကျပ်
» Sea view Banglow Building Type ကို 90,000 ကျပ် ကျသင့်ပြီး 3ယောက်ခန်း မိသားစုခန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ခရီးတစ်ခုရောက်ရင် လျှောက်သွား l လျှောက်စားပြီး ဟိုတယ်မှာ အခန်းထဲမှာ အချိန်ပြည့်မရှိတာကြောင့် Garden View ကို တည်းခဲ့တာပါ။ ဟိုတယ်ကတော့ ရန်ကုန်ကနေ ကြိုတင်ပြီး မှာထားတဲ့အတွက် မနက်2နာရီမှာ early Check in ရပါတယ်။ မနက်စာကတော့ ဒေသစာအပြင် အကုန်ရပါတယ်။ မနက်စာက Buffet ပါ။ sea side မှာ အေးအေးဆေးဆေးနားဖို့အတွက်လည်း ခုံလေးတွေချထားပါတယ်။ ဆားဗစ်ကလည်း ကောင်းပါတယ်။ Spa လည်းရပါတယ်။ တစ်သောင်းခွဲပါ စျေးနူန်းက။ ရေကူးကန်ကလည်း သန့်ရှင်းပါတယ်။ Yamonr Oo ကို ရွေးတာက ချစ်သူများကျွန်းနဲ့ နီးလို့ပါ။ ပြီးတော့ရွာထဲနဲ့ဝေးတော့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဆိတ်ငြိမ်ပြီး ပင်လယ်လိူင်းသံတွေကို ကြားချင်လို့ပါ။ ရွာထဲကို သွားချင်ရင်တော့ ဆိုင်ကယ် Taxi နဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။ စျေးနှုန်းက 1500, 2000 ခန့် ကျသင်ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ တည်းမယ်ဆိုလည်း ဟိုတယ်တွေပေါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူများကျွန်း၊ ကျောက်မောက်နှစ်မဘုရားတို့ကိုတော့ အတော်လမ်းလျှောက်ရနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ငွေဆောင်ရောက်ရင် Blue Ocean Hotel & Hotel ACE မှာတည်းဖို့ ညွန်တတ်ကျပါတယ်။ သူ့တို့ကလည်း ဝန်ဆောင်မူ၊ နေရာထိုင်ခန်းသန့်ရှင်းမူ့ ၊ အစားအစာ ကောင်းပြီး စျေးနူန်းကလည်း မဆိုးပါဘူး။
(Yangon) 01-530722, 01-530731
S/S(38), Shwe Tharaphi Yeikmon, Bayint Naung Rd, Kamayut, Ygn
(ငွေ ဆောင် ကမ်း ခြေ ) 042-40335, 042-40336 , 042-40337
• ဘာတွေလည်စရာရှိလည်း •
» ဆင်မ တံငါရွာ
ငွေဆောင်ရောက်ရင် တချို့သူတွေ သွားနေကြတွေဖြစ်တဲ့ ဘုရားသုံးဆူ ၊ မြွေကျွန်းကို ဆိုင်ကယ်ငှားပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်က မိမိဘာသာမောင်းရင် တစ်နာရီ 4000 ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အေးဆေးစီးလိုက်ချင်တာလည်း ငှားတဲ့သူကိုပါ လိုက်မောင်းပေးစေခဲ့ပါတယ်။ မောင်းရမှာပျင်းတာလည်း ပါတာကို။ လိုက်မောင်းပေးတဲ့သူပါခေါ်ရင် မြွေကျွန်း၊ ဘုရားသုံးဆူကို 8000 ပါ။လမ်းတလျောက်မှာ သဇင်ရွာကို ဖြတ်ရပါတယ်။ ဘုရားသုံးဆူကတော့ ဓါတ်ပုံသမားတွေအတွက် ရူးခင်းကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရပါတယ်၊ အဲဒီနားမှာ သဲတွေကတော့ ဖြူဖွေးနေပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူမှာ ဒေသခံ လက်ဆောင်ပစ္စည်း ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်။ ခရုပုတီးl ကျောက်ခတ်l ခရုဆွဲကြိုးတို့ပါ။ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းယူ မိတ်ဆွေစေတနာရှိသလောက်ပါပေးခဲ့ပါတဲ့။ရွာထဲက လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ စျေးကြီးလှပါတယ် ဒီပစ္စည်းလေးတွေက။ ထန်ရည်ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ထန်းရည်လေးကစ်ရင်တော့ ဇိမ်ပေါ့။ ပင်လယ်လေလေးက တဖြူးဖြူးနဲ့လေ။
ဘုရားသုံးဆူနေ မြွေကျွန်းကိုသွားပါတယ်။ဘုရားသုံးဆူနဲ့ မြွေကျွန်းက နီးနီးလေးပါ။ခြေလျင်လျှောက်သွားတောင် ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မြွေကျွန်းမှာဆို နဂါးရုံးဘုရားရှိပါတယ်။ မြွေကျွန်းမှာ မြွေတွေရှိလားဆို ရှိပါတယ်။ ဘုရားအောက်က ကျောက်ဆောင်တွေကြားမှာ ပင်လယ်ဂျပ်မြွေတွေတော့ အများသား။ကိုက်မိရင် ထန်းလျက်ခဲနဲ့ အုန်းရေသောက် ပျောက်တဲ့ဗျာ။အိပ်မပျော်ရပါဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်ကြားမိတဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ။ အန္တရာယ်တော့ မရှိပါဘူး။ခဲနဲ့ မပစ်ဖို့ပါပဲ။ မြွေကျွန်းကနေ ချောင်းသာကမ်းခြေကို လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ချောင်းသာကို စပိဘုတ်နဲ့ ငွေဆောင်ကနေ သွားမယ်ဆိုရင်လ 150000 ပါ။ နာရီဝက်မောင်းရပါတယ်။ စပိဘုတ်l စက်လှေနဲ့ကတော့ ငွေဆောင်ကနေ ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းအထိ ပို့ပေးတဲ့ ဆားဗစ်တောင်ရှိပါသေးတယ်။သူကတော့ ရေလမ်းခရီး အသွားအပြန်ကြာချိန် 6နာရီပါ။
ချစ်သူများကျွန်းကတော့ ဟိုတယ်နဲ့နီးတဲ့ အတွက် လမ်းလျှောက်သွားလို့ရပါတယ်။ ရေကျချိန်မှာ ကျွန်ပေါ်ကို လမ်းလျှောက်တက်လို့ရပြီး တချို့ရေတက်နေချိန်မှာတော့ စက်လှေငှားရပါတယ်။ မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တွေကနေ ချစ်သူများကျွန်းကိုတော့ ဆိုင်ကယ်ငှားခက 2000 ပါ။ လည်စရာတစ်ခု အနေဖြင့် အနီးတဝိုက်မှာ ဆင်မတံငါရွာနဲ့ ဆင်စခန်းရှိပါတယ်။ ဆင်စခန်းကတော့ မနက်7နာရီကနေ နေ့လည် 11 နာရီ အထိပဲဖွင့်တာပါ။ ဆင်စခန်းက ငွေဆောင်ကနေ ပုသိမ်အထွက်မှာရှိပါတယ်။
ငွေဆောင်ရောက်လို့ ဘားသွားရတာ ဝါသနာပါသူတွေအတွက်လည်း Yamonnar Hotel အထွက် Silver Cost Hotel မရောက်ခင် တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ Umi Bar ရှိပါတယ်။ သူကတော့ ညဆို မီးကစားတဲ့ Dance. Performance တွေကြည့်လို့ရပါတယ်။ တချို့ရက်တွေမှပါ။ ကံကောင်းရင်တော့ တွေ့ခဲ့ရမှာပါ။ အဲဘားလေး အောက်မှာ စက်ဘီးစီးပြီး လျှောက်ပတ်ချင်သူတွေ အတွက် စက်ဘီးငှားလို့ရပါတယ်။
• Snorkeling လုပ်မယ် ငှက်ကျွန်းဝယ် •
Snorkeling လုပ်ဖို့ ငှက်ကျွန်း ၊ တောင်လျားရှည်ကျွန်း ကိုသွားါနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ကျွန်းလို့ခေါ်တာက ကျွန်းပေါ်က ကျောက်သားတောင်ပေါ်မှာ ငှက်သိုက်ရှိလို့ပါ။ မိတ်ဆွေတတ်နိုင်တယ်ဆို လေ့လာလို့ရပါတယ်။ စက်လှေက တစ်ယောက်ကို 25000 ကျပ်ပါ။ ကံကောင်းချင်တော့ တခြားအဖွဲ့က မသွားဖြစ်လို့ဖျက်လိုက်လို့ ကျွန်တော်တို့ 2ယောက်ပဲ သွားဖြစ်ပါတယ်။ ကြာချိန်က အသွား တစ်နာရိခွဲ အပြန်တစ်နာရီခွဲပါ။ညနေ 5နာရီလောက်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ Speed Boat နဲ့ဆို တစ်သိန်းဖြစ်ပြီး လူ6ယောက်လောက်ဆန့်ပါတယ်။ ကြာချိန်က 25မိနစ်ထဲပါ။ လူများတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ စားဖို့ နေ့လည်စာ ၊ Snorkeling Equipment ၊ ကိုယ့်နဲ့အတူ လိုက်ငုပ်ပေးမယ် သူ ပါပြီးသားပါ။ မနက် 9နာရီမှာ ချစ်သူများကျွန်းကနေ စထွက်ပါတယ်။ တောင်လျားရှည်ကျွန်းကို အရင်သွားပြီး ပြီးမှ ငှက်ကျွန်းကို ဆက်ထွက်ပါတယ်။ ချစ်သူများကျွန်းကနေ တစ်နာရီ ခွဲ မောင်းပီးနောက် တောင်လျားကျွန်းကိုရောက်ပါတယ်။ တောင်လျားရှည်ကျွန်းက ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်းပေါ်တက်လို့မရပါဘူး။ လိူင်းတော့ နည်းနည်းရှိပါတယ်။ အဲမှာ ကိုယ့်တို့လို ငုပ်နေတဲ့ Foreigner လှေတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်းကိုရောက်ပြီး snorkeling လုပ်ဖို့ Life jacket , အသက်ရူတံတွေ တပ်ပြီး ရေငုပ်ပါတယ်။ ရေမကူးတတ်သူတွေလည်းငုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်နဲ့ မီတာ တော်တော်နက်ပါတယ်။ ရေကအရမ်းကြည်လင်နေပီး စက်လှေပေါ်က ကြည့်ရင်တောင် ရေအောက်က ကျောက်ဆောင်တွေကို မြင်ရပါတယ်။ရေအောက်ကမ္ဘာကို ကြည့်ရတာ အသက်ရူမှားစေပါတယ်။ ငါးလေးတွေ သဘာဝအတိုင် ကူးခတ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ငါးလေးတွေကတော့ အရောင်စုံပါ။ ငုပ်ပြီး စက်လှေပေါ်ပြန်တက် ချမ်းနေတာနဲ့ ဒေသခံ စက်လှေသမားကြီးတွေက အလိုက်တသိ ကော်ဖီဖျော်တိုက်ပါတယ်။ အလကားသောက်ရတာကို ။ဒေသခံ ရေလုပ်သားကြီးတွေက သဘောအသေကောင်း။ကော်ဖီသောက်ပြီး ငှက်ကျွန်းကို ဆက်ထွက်ပါတယ်။
ငှက်ကျွန်းကိုတော့ နာရီဝက်လောက်မောင်းရပါတယ်။ ငှက်ကျွန်းမှာ ကျကျွန်းပေါ်တက်လို့ရပါတယ်။ ရေအရင်မငုပ်သေးပဲ ကျွန်းပေါ်အရင်တက်ပါတယ်။ စက်လှေက ကျွန်းနားထိ ကပ်လို့မရတဲ့အတွက် ကျွန်ပေါ်က တံငါသည်မိသားစုလှေနဲ့ တဆင့်သွားရပါတယ်။ကျွန်းပေါ်မှာ တံငါသည် မိသားစု တစ်စုရှိပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်က ကျောက်ခဲ့လေးတွေ အတော်လှပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ နေ့လည်စာစား အုန်းရေသောက်ပြီး ၊ ဒေသခံ စက်လှေသမားကြီးတွေနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာပြောတာ ၊ ကျွန်းပေါ်ပတ်ကြည့်ကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ကျွန်းဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်းပေါ်မှာ ငှက်သိုက်တွေရှိပါတယ်။ကျောက်ဆောင်တွေအရမ်းမြင့်လို့ တက်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အိမ်ပြန်လက်ဆောင်အဖြစ် ကျွန်းပေါ်က တံငါသည် မိသားစုဆီမှာ ငါးခြောက်လက်ဆောင်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်ကနေ စက်လှေပေါ် ပြန်တက်ကာ snorkeling လုပ်ပါသေးတယ်။ငှက်ကျွန်းမှာက လိူင်းမရှိတဲ့အတွက် ရေငုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ရေအောက်ကိုကြည့်ရတာတော့ အသက်ရူမှား မလားပဲ။ ကိုယ်တွေက ကုန်းတွင်းမှာ နေတော့ ဒါမျိုးတွေ မမြင်ဘူးဖူးလေ။ ရေငုပ်ပြီးတော့ စက်လှေပေါ် ပြန်တက်ကာ ကမ်းခြေကို ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
တခုသိခဲ့ရတာက ပင်လယ်ငါးတွေ ထမင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာပဲ။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပြန်ခါနီး ပိုနေတဲ့ ထမင်းတွေကို ပင်လယ်ထဲကျဲလိုက်တာ ငါးတွေရောင်စုံ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရေပြင်ပေါ်တက်လာပြီး လုစားကြပါတော့တယ်။ရေငုပ်တုန်းက ပုန်းနေတဲ့ကောင်တွေ အခုမှတွေ့ရတော့တယ်။မြိတ်ကျွန်းစုက ကျွန်းတွေရဲ့ သန္တာကျောက်တန်းတွေက ရေတိမ်ပိုင်းမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ အခုငှက်ကျွန်းမှာက ရေအနက်က တော်တော်နက်တဲ့အတွက် ကြည့်ရတာ ဝေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ငှက်ကျွန်းက သဲသောင်ကမ်းခြေမရှိတဲ့ ကျောက်ကျွန်းကြီးပါ။ ကျွန်းပေါ်မှာတော့ တယ်လီနောဖုန်းလိုင်းမိပါတယ်။
ငွေဆောင်ရောက်လို့ Snorkelling လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် 0943166429 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ စေတနာပါပါနဲ့လုပ်ပေးတာပါ။ပေးရတာနဲ့ တန်တယ်လို့ ယူဆမိမှာပါ။
• ဘာတွေစားစရာရှိလည်း •
ငွေဆောင်မှာစားစရာကတော့ ရွာထဲက စားသောက်ဆိုင်တွေပဲရှိပြီး ပင်လယ်စာတွေနှင့် ရခိုင်အစားအသောက်တွေပေါလှပါတယ်။အကုန်လုံးစားကောင်းနေတာတော့ ဘယ်ဆိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မညွန်တော့ပါဘူး။
• ဘာတွေယူဆောင်သွားရမှာလည်း •
၁. SPF များများပါတဲ့ Cream ပေါ့ (ကမ်းခြေက ပြန်လာရင် အသားအရေက ကျွဲက အဖေlအမေ အခေါ်မခံရအောင်ပါ)
၂. ရေကူးဝတ်စုံ(ဒါကတော့ အဓိကကျပါတယ်)
၆. မိမိသုံးနေကျ ဆပ်ပြာ(ခရီးရောက်မှ ဝယ်ချင်ဝယ်ပေါ့)
• Cycle Taxi စျေးနူန်းတွေက •
ဆင်စခန်းကို - 13000
ချစ်သူများကျွန်း - 2000
မြွေကျွန်း၊ဘုရားသုံးဆူ - 8000
ဆင်မ တံငါရွာ - 20000
• Speed boat •
Bird island _ 100000 (6pax)
Gaw Yan gyi island _ 300000
Chaung Tha beach _150000
• Jet ski _ 50000 (1pax) •
• Banana boat _ 5000 (1pax) •
*** စျေးနှုန်းတွေက အချိန်နဲ့လိုက်ပီး ပြောင်းရင်ပြောင်းမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ငွေဆောင်က ချောင်းသာ ၊ မောင်းမကန် စတဲ့ ကမ်းခြေတွေထက်တော့ ရေအရမ်းသန့်ပြီး လှပါတယ်။ဒါပေမယ့် အာရှအလှဆုံးကမ်းခြေ ငပလီကိုတော့ မမှီနိုင်ပါ။ ငွေဆောင်က ကျောက်ဆောင်အရမ်းပေါပြီး အနီးတဝိုက်မှာ လည်စရာ ပတ်စရာ ပေါများလှပါတယ်။ တည်ခိုဖို့ကလည်း Budget အနေနဲ့ဆိုရင် ရွာထဲမှာ Motel l Inn l Guest House တို့က စျေးနူန်းသက်သာစွာဖြင့် ပေါများလှပါတယ်။ အနီးတဝိုက်ကျွန်းတွေကို Snorkelling ၊ Diving လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ Adventure အတွက်ကလည်း ကျွန်းတွေပေါ်ကကျောက်ဆောင်တွေပေါ်တက် မောရင် အုန်းရေသောက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ငါးကင်စားလို့ရပါသေးတယ်။ထိုအပြင် ပင်လယ်ထဲ ငါးဖမ်းစက်လှေဖြင့် ငါးဖမ်းတဲ့ ဝန်ဆောင်မူ့တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။Diving အတွက်ဆိုရင် Myanmar Dive Center နဲ့သာချိတ်လိုက်ပါ။ ဒါကြောင့် အကုန်အကျသိပ်မများပဲ ရေသန့်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ကမ်းခြေကို သွားမယ်ဆိုရင် ငွေဆောင်က အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။